လာမယ့် ၂၀၁၅ ခွပ်ဒေါင်းဆိုရင်တော့ ရိုက်ချက်ပစ်မယ့်ပြည်သူများ ~ မျိုးချစ်သူရဲကောင်းများ
နိုင်ငံ့အတွက် ကောင်းရာကောင်းကျိုးကို လုပ်ပေးတဲ့သူမှန်သမျှ
ပြည်သူတွေက ခြသေ့င်္သားကိုစားချင်တာကွ၊ ဒေါင်းကိုဘာမှမလုပ်ဘူး၊ သံဃာသတ်တဲ့စစ်ခွေးတွေကိုရိုက်သတ်ချင်တာ
ခြင်္သေ့ဆိုတာကတော့ မြက်မစားဘူး။ ဒေါင်းလည်းချမ်းသာမပေးဘူးကွ။ စားမှာပဲ Layoung ရေ။ ခြင်္သေ့ဆိုတာ အမြဲတမ်း ဘုရင်ဆိုတာ သိထားမှပေါ့ကွ။ နားလည်လား။
ဒီအလံသည် စစ်မှန်သော ဗကသ ၏တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဦးအလံတော်ဖြစ်ပါသည်။
ပတ်သက်သော ပါတီအဖွဲအစည်း အားဝေဖန်စေလိုပါသည်။
အသက်စတေးသွားသော ကျောင်းသားများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုစောင့်သိသောအားဖြင့် အလံတေ်ာအား အလေးဂရုပြုပေးပါရန်တိုင်းရင်းသားညီအကိုများအား
BNUF (မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး-ဗဟို)
Stupid and Fuck>> မျိုးချစ်သူရဲကောင်းများ
ခင်ဗျားတို့ပြောနေဒါဟာ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် မရှိလို့ပြောဒါလို့ ယူဆပါတယ်
သူများမကောင်းကြောင်းပြောဒါ ကိုယ်တိုင်မကောင်းလို့ပေါ့ ခင်ဗျားတို့ မြန်မာလူမျိုးမှ
ဒီ Post ကို ရေရေ လည်လည် ထောက်ခံတယ် ။ အဘွားကြီးရေ အသက်လည်းကြီးပြီ အိုလည်းအိုနေပြီ ။ မိတ်ကပ်လိမ်း ပြီးလွှတ်တော်လည်းတက်မနေပါနဲ့တော့ ။ ဗိုလ်ချုပ်အရှိန်နဲ့လည်း popular မဖြစ်ချင်ပါနဲ့တော့ ။ ဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိ မလုပ်ပဲနဲ့ ရထားတဲံ နိုဘယ်ဆု ကြီးလည်းထုတ်ထုတ် ပြီးတော့မကြွားပါနဲ့တော့ ။ တိုင်းပြည်ကို ဈေးကွက်ဖွင့်ပြီးရောင်းစားဖို့လည်း မကျန်ပါနဲ့တော့ ။ တိုင်ပြည်တိုးတက်ရေး ဆိုပြီး ကြွေးကြော်ပြီးတော့ ဘာမှ တိုးတက်အောင်မလုပ်ပဲနဲ့ ကန့်လန့်တိုက်တဲ့ ဘေးလွယ်အိတ်ကြီးလည်းမလုပ်ပါနဲ့တော့ ။
နိုင်ငံအတွက် တကယ်အကျိုးဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့သူတွေ ထဲမှာ သူများထိုင်ခုံကိုထိုင်တာကို မကျေနပ်လို့ လိုက်လုပ်နေတဲ့သူတွေပါနေတယ်၊ ကိုက သူတို့ထက်ကျော်အောင်မပြောနဲ့
သူတို့လောက်ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ပါ့မလားလို့ ကိုယ့်ကို ပြန်မေးဘို့မေ့နေကြတယ် အဲဒီလူတွေက ဘယ်လို ပါဖောမန့်စ် လုပ်မှာလဲ သူကိုတိုက်ခိုက်လိုက်၊ ကိုယ့်ကိုပြန်တိုက်ခိုက် လိုက်နဲ့ အချိန်တွေဖြုန်းပစ်မှာကိုတော့ စိုးရိမ်ပါတယ်လေ
စာရေးသူကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်အတွက် ဘာလုပ်သလဲ ဆိုတာလေး ကိုယ့်ကိုကိုယ် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပြန်မေးကြည့်ပါလား..
တကယ်အဖြေမှန်တွေ့ရင် ကျွန်မဘလော့ကို လာပြောနော်..
၂၀၀၇တုန်းကတပ်မတော်ကသတ်လို့ သေနေတဲ့ဘုန်းကြီးအလောင်းမြင်ဖူးလား?မီးခိုးဗုံးနဲ့ပစ် တော့ ပြောတယ်၊အစိုးရကသပိတ်စခန်းကနေနောက်ဆုံးထားပြန်ထွက်ရမဲ့အချိန်ပြော
တယ်လေ၊ မပြန်လို့ မလွှဲသာဘဲဥပဒေနဲ့ အညီလုပ်ရတာလေ၊ ဘုန်းကြီးကဘာလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမကျိန်းဘဲ၊သူနဲ့ မဆိုင်တဲ့ သပိတ်စခန်းထဲညအချိန် ဘာလို့ ရောက်နေလဲကြတော့မပြော ကြပါလား?
ဒီပို့စ် ကိုတင်တဲ့သူက အာဏာကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်သေးလို့ ကလိန်ကကျစ်နဲ့ တိုင်းပြည်အာဏာကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အရှက်မရှိပဲယူထားတဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေး၊ ပညာ ရေးတွေကို နိုင်ငံတကာရဲ့အောက်ဆုံးရောက်အောင်လုပ်ပစ်လိုက်တဲ့ အာဏာရူးကြီးတွေ ရဲ့ တပည့်လား၊သားသမီးလား? ဒါမှမဟုတ် ခရိုနီ တွေရဲ့ မယားပါသားလား၊ အေး.. မင်းတို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကရော ဘာများကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့လဲလို့...ကျွန်တော်မေး ပါရစေဗျာ...
တိုင်းပြည်အတွက်ခများဘာတွေပေးဆပ်ဘူးလဲစာရေးသူခင် များအတ္တကိုကြီးကြဃ်စေဖို့တိုင်ဲးပြည်ရဲ့ပေးဆပ်သူ သူရဲကောင်းတွေကိုအသုးံမချပါနဲ့ဗျာ
"ဒီပို့စ် ကိုတင်တဲ့သူက အာဏာကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်သေးလို့ ကလိန်ကကျစ်နဲ့ တိုင်းပြည်အာဏာကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အရှက်မရှိပဲယူထားတဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေး၊ ပညာ ရေးတွေကို နိုင်ငံတကာရဲ့အောက်ဆုံးရောက်အောင်လုပ်ပစ်လိုက်တဲ့ အာဏာရူးကြီးတွေ ရဲ့ တပည့်လား၊သားသမီးလား? ဒါမှမဟုတ် ခရိုနီ တွေရဲ့ မယားပါသားလား၊ အေး.. မင်းတို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကရော ဘာများကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့လဲလို့...ကျွန်တော်မေး ပါရစေဗျာ..."
လ ရောင် နဲ့ စံ ပယ် ဖြူ က လင် မ ယား လား ၊ လ ရောင် ဆို တဲ့ ကောင် ဒီ မို က ရေ စီ ဆို တာ မင်း တို့ လို စည်း ကမ်း မ ရှိ ၊ အ စိုး ရ လုပ် သ မျှ မ ကောင်း ပြော ဖို့ လောက် ပဲ သိ တဲ့ ကောင် တွေ နဲ့ မ တန် ဘူး ၊ ဒေါ် စု နဲ့ ဒီ မို က ရေ စီ ဘက် တော် သား ဆို တဲ့ ကောင် တွေ က ဒီ မို က ရေ စီ နဲ့ လူ့ အ ခွင့် အ ရေး ကို ဗန်း ပြ ပြီး တိုင်း ပြည် ကို ရောင်း စား မယ့် ကောင် တွေ ၊ မင်း တို့ ကို လီး ပဲ
ခွတ်﻿﻿ဒေါင်း သား စားခြင်﻿
No nld ,,no problem
No daw su no problem
No win htain no problem
No nyan win no problem
No kalars no problem,,
this is myanmar country,, the original religion is buddhism,never touch our great land..we must be protect our 8 tine yin thar...
NO DAW SU,,NO PROBLEM,
NO .NLD NO PROBLEM
NO .88 DOG...,,NO PROBLEM
NO.. ZIN MAR , NO PROLEM,
NO ZEE GYOUT..NO PROBLEM
NO WIN HTAIN,, NO PROBELM,
NO NYAN WIN,, NO PROBLEM
TAINE YIN THAR ARR LONE SI LONE NAING KYA BER ZAY,,
NO..NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO..NO NO NO..
DON' TOUCH OUR COUNTRY..
THIS IS MYANMAR,
THIS IS OUR GREAT RELIGION.
THIS IS OUR GREAT CULTURE..
THIS IS OUR MOTHER LAND IN THIS WORLD..
SO NO NEED [NLD] THEY ARE WASTE,,,
ကျွန်တော်ကတော့ ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲ ထောက်ခံမှာပါ
နှာစေးသလိုလို ခေါင်းရှောင်တတ်တဲ့ ခေါင်းရှောင်တွေကိုလဲ လူတွေက သိနေပါပြီလေ။
၂၀၁၅ ကြရင်တော့ အဖြေပေါ်ပါလိမ့်မယ်
၈၈ ကောင်တွေက နိုင်ငံအတွက် ဘာများလုပ်ပေးလို့လဲ...
လူ့အခွင့်အရေးက ...ဘာလဲ လီးလူ့အခွင့်အရေး..လား..မင်းတေ့ာ လူ့အခွင့်အရေး
အန်တီစုကိုတော့ သား လေးစားပါတယ်...ဒါပေမဲ့...တပ်မတော်ကိုမထိပါနဲ့...
ပြည်သူကို ထိခိုက်လာရင်..အသက်ပေးကာ ကွယ်မဲ့ ပြည့်သူ့ရဲ့ တပ်မတော်သားတွေပါ...သားက စစ်အရှိဟောင်းတစ်ဦးရဲ့ သားသမီးပါ...
ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေရေဒီယို နားထောင်တိုင်း အန်တီစုကို လေးစားခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ...အန်တီစု အဖေလည်းစစ်ဗိုလ်ဆိုတာ အမှတ်ရပါ...
ဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြော တစ်ကယ်တမ်း အရေးကြုံလာရင် တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူ တွေအတွက် ဘယ်သူတွေကဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်၊ ဘယ်သူတွေက ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံခဲ့တယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
အရေးကြိုလာရင် ပြန်သူတေဘက်က ရှိနေတာ ခွပ်ဒေါင်းလား သိရင်ပြောပေးပါ
The photos of Min Aung Hlaing and Thein Sein